Oromoon Diina 3 qaba diini Oromoo kun 3n qama furmata keenya ta’uu hin danda’aan.
Qabsoo daa'imni keenya itti dute fayyida dhunfati hin qurguramu.
Oromoon Qawee Beljigii ykn qawee biyya Belgiumti hojeetameen gargarsa European gabroome qaween lolee bilisooma malee marii biyya Belgium Brusselsti gargarsa European goodhamuun kan bilisoomuu miti.tufiin Oromoo irratti godhamu badii diina Oromoo arifachisa qabsoon Oromoo EU fi USA keessati utuu hin tane diire irratti.
Diini Oromoo 3 Nafxanya Haaraa, Nafxanya Mofaa fi Wara isaan gargare akka nu bitan isaan goodhe biyoota Europa fi USA dha. Lakkofsi 3 Oromoo birrati hirudha. Yaadi 3 furmata garii hin ta’uu hanqudha, ifa fi cimma hin ta’uu. Jarsuma ilee namni 3 hin waamamu jarsa 5tu waamama. Jallatansi jibitansi waltajjii Habashaa fi Media Habashaa argachuuf jeecha Oromummaa koo gane habashaa jala adeeme waltajjii isaani keessan namni akka na dhaga’uu goochuu hin barbaadu. Waan nu gadisisu duri gaafa Oromoon hin barbaadamne qoofa keenya Brsussels, Luxembourg, fi Strasbourg European Paarlamaa jalaa qoora keessa ola ture, hara qabsoo qeerroon Oromoo goodhen gabaasaa qabsoo Oromoo dhagefaachuuf irratti kan Afeeramu abba dhimma Oromoo utuu hin tane ykn Hayyuu Dure ABO Daawud Ibsa hafe Dr. Birhanu Nega afeeramuun na aja’ibe isaa caalaa ammoo warii yaada kana madisise Oromoo ta’uun isaani caalaati nu gadisise.
Hara diina keenya jara kana 3n ta’uu utuu beeknu qamaa furmata rakko keenya goodhamne adeemuun keenya qabsoo keenya achii dheerresa malee hin gababsuu. Oromoon Dhiichisa Habashaa waliin egalee kana dhaabatee ilaaluu qaba. Qabsoon Oromoo TPLF buqisan nama dhunfaf Angoo qabsisu yoo ta’ee waan yeroo keenya itti baleesinuuf hin qabnu, qabsoo haqaa ganama mana baneef yoo ta’ee ammoo kayyoo haqaa sana qabane adeemuu qabna. Kanan achii ol gadii utaluun kun luluqa’uu ykn ququnca’uu fidaa.
Lakkofsi 3 Oromoof hin ta’uu lakkofsi Oromoon yeroo baaye fayyadamuu 5 yoo baayate 8 ykn 9 isaa kana ibsuu hin feedhuu waa’ee kana hayyuun isaan ilaalatu jiru. Nu waan hunda nutu beeka yaada jeedhuu hin qabnu. Garuu ammoo seena fi ayyana Abba ofi yaadacha adeemun garii dha. Harmeen koo yeroo gaba dhaqxuu yoo aduree guratiin ykn saree guratiin itti dhufte ykn qaxamurte gara manati deebite booda adeemti. Kanaaf Madii rakkoo keenya diini keenya 3n furmata rakko keenya 3 ta’aani dhiyachuu hin qaban. Waan hunda natuu beeka jeechun keenya miti. Waan hunda anatu beeka kara koo yoo ta’ee malee yaadi jeedhu adeemsa qabsoo kanati gufuu ta’aa waan jiruf.
Nafxanyoota hara TPLF waliin ilee kara nagaa waliin hojjeechu ni danda’ama jeechuun qabsoo keenya fininsuu dhiifne dhaabbane akka isaan dhageefanuu nu goodhan yeroo keenya balleessan turan.
- Qabsoo hidhannoo geggesuun bilisumma argachuuf haali jiru mijata miti: Geograficaliy rakoo qabana, qoorii ilee nu midha jira, umuriin keenya ilee deema jira kkf dhiyacha ture;
- Qaamni waraanan ykn humnan angoo qabatee demokaratawwa ta’uu hin danda’uu kanaaf qabsoo hidhanoo tobachuu qabna ( akka ijjoolle nu gowomsuu yaalan) deebi’an ammoo wara qawee batuun wal ta’an qaween ABO nama hin ajjeesu lata kan A-Ginbot 7 malee.
- Dhagaa darbachuun, lubu baleesuu fida kanafuu marii fi mormii jeequmsa hin qabnee geggesun mootummaa jijjiru qabna jeedhan
Nafixanyoon moofan diina keenya isaa cimma ta’uu utuu beekan isaan waliin hojjeene ykn hariroo qabane malee essaiyuu hin geenyuu wari jeedhan baayachuu irra darban qabsa’oota Oromoo qabsoo keessa basuuf waan hunda goodha jiru.
- Qeeroon qabsoo keenya yeroo fininsuu egaluu lakki jara kana malee hojjeechuu hin dandeenyuu yaadi jeedhuu asi ba’ee.
- Jarii diina keenya ilee namoota kanati quba qaban namoon kun durii iyuu qabsoo Oromooti akka makaman kan goodhe nu dha ammas waliin hojjeechuu qabna jeedhan.
- Maddi rakko keenya utuu waan tokko isaan hin diirqisisin Ogganoota Oromoo ture warii ofin jeedhan lafaa ka’aan dura iyuu dogoogore ture, waan kaneef kanaaf miti, karan irra deema ture siiri miti, gaafi nu gaafacha ture wa’een Bilisumma fi walabuma siiri miti, Finfinnen kan Oromoo miti kan saba fi sabilamiti kkf utuu hin reebamin dubachuu egalan
Maddi rakko 3faan diina keenya Europe fi USA yoo hirmachifne malee furmatii rakko keenya hin yaadamu jeedhan ni sodachisuu. Warii akka garbomnu nu goodhan amale dhuga keenya dhaga'uu hin feedhan kun qoorano waga 10ti.
- Diina kaleessa akka nu garboomnu nu goodheti firomne hayyama isaan irra argane malee hin bilisoomnu jeechun sirii miti. Bilisummaa diina irra kadhachuun hin argamuu beeka.
- Siirna Gadaa Oromoo qabnuu irra Democrasi jara kana moodela goodhanee adeemuu qabna waan isaan itti amanan malee kara bira adeemuu hin qabnu. USA wayee Demokarasi lalabdu mirga gooracha iyuu hin kabachifne.
- Nama isaan jallatan qoofa miseensa goodhane seera isaan jallatan qoophefane kara isaan nu akkeekan irra adeemuu qabna. Warii addii guraacha garboonfata waan turanf garbonfata degeruu malee bilisummaa hin degeran kun haqa.
Yaadi 3 kun furmata ta’uu hin danda’aan kun hunda sababa dhiyeesun kana dura rakko qaban ittin dhokfachuuf malee qabsoo saba biyya birra hayyama diina isaan irra fudhatan miti qabsoo geggesan injifannon kan xumuran. Nu qooratii caafee keessa of keessati bataa akka ture Prof. Getachew Begashaw Vistion Ethiopia Konferensi DC waamamee irratti Ogganoota Qabsoo Oromoo duranti quba qabuun jeecha inni jeedhe namoon warabani Website fi Facebook irratti facasan argine ture jeechuun sun hamile keenya heddu nu xuuqe adeemasa keenya dhabanee akka ilaaluu nu goodhe, amantii Ogganoota Oromoo hunda irra nu dhabsise.
Komachuu ykn rakkoo himuu qoofa miti nu yeroo hunda yaada furmata waan dhiyeesa ture amma garuu kana booda yaada furmata hin dhiyeesinu sababin isaa:-
Oromoo tokko tane malee rakko kana keessa ba’uu hin dandeenyuu koota tokko tana jene hayyuu Oromoo Ogganoota siyaasaa hunda marisifne kadhaachaa ture garii tokko araramuu hin barbaadan waan wal madeesan qabuu, garii tokko ammoo akka isaan jeedhanti, namni isaan jeedhan fi bakka isaan jeedhanti hayyama diina keenya 3n irra fudhatan waan isaan goodha jeedhan goochuu barbaduu.
TPLF diyaaspooraa keessati Oggannota OPDO ergitee ijara turte kanaafuu diyaaspooraa qabsoof qoophesinu kana siiriti qoorachuu qabna jeenan nama baayifachuu fi mallaaqa argachuun tumsituu (teefoozoo) baayifachuuf jeecha TPLF Oromoo keessati ijjaraamte waltajjii hunda qabate media irra qabsa’aa tate qabsa’oota ala qabde jirti. Xiifuma iyuu diyaaspooraa qabsoo gargaruu irra darbe qama mootumma TPLF ta’ee hidha Bishan laga Abayya ijarsaf mallaaqa busuun Kondumniyemti galma’uu egale lafa Oromoo Tigire irra kadhaachuu egale, Sumii Tigiren itti keenituu nu nyaachisuu egale. Ijjoolle Oromoo Junedin Sadoo duri TPLFf ijjaree kun hara Actvisti Oromoo ofin jeete Junedin Sadoo goota keenya Leencoo lata fi Daawud Ibsa diina keenya jeete bareesa jirti. Actvistoota nama isaan to’atu hin qabne seera ittin bulmata kan hin qabne, kayyoo fi tarsimimoo hin qabne dhaabilee siyaasaa waga 45 sochoo’a jiru fi qabsa’oota gameeyii Oromoo hunda akka fara qabsoo Oromooti lakkawwan jiru kun ergama enyuuti isiinfin dhifna.
TPLF wayyanen kara nagaa hin buuqatuu qabsoo hidhanoo jaabesine WBO fi ABO jabeesine diina qaween dhufee qaween buqisuu qabna jeena qaween furmata hin ta’uu kara nagaa wayya jeedhan isaa nuu yaalee dadhabne birra adeemneti nu deebisuuf jarsumma nuti ba’aan.
Qabsoon biyya ala ta’aan remooti controolin biyya keessati geggesan kun bu’aa hin fiduu qabsoon biyya keessa galuu qabdii qabsa’aan diiree irra ba’ee Qurxumii Bishani ba’ee ta’aa, inni saba isaa keessatti nama ijjaruu fi hojii malee olee hin beekne biyya ala hojii malee yeroo kampy keessa ta’uu hamilee ni caabdii ijjaruu dhisee diigumasa egala dhadachuu dhisee hamati ka’aa kanaaf biyya keessatti dargagoo ijjaree qabsoo biyya keessa haajabeesinu jenan. Dargagoota nu biyya keessati ijjaruu nu jala diiguu, email fi media nu ittin hawwassa keenya qunamnuu caabsan diinaf keenun miseensota keenya gaga’uun rakko kana soodan nama ijjaruu irra akka dhabanuuf guufuu nuti ta’aa turan. Eenyuu isaan yoo jeetan wara lak. 2 irratti caqasaman diyaaspooraa TPLF kara OPDO biyya alati ijjarate dura Artistoota biyya galchite ergasi Haawwassa Oromoo diigde, hayyuu Oromoo ilee lafa fi konduminiyemn gowwomsite biyyati daachaasa turte, kun akka jiru waltajji hunda irratti ibsachaa ture.
Mal goonu jeedhe gaafii jeedhu? Qabsoo keenya shafsisuuf yaadi furmata gorsaa fi akkeeka yeroo heddu ifan media irratti, email fi xalayaan chaapa itti goodhame isiin ergama ture, waltajji marii irratti tokko tana kan jeedhu qofa utuu hin tanee mootummaa Oromoo baqaa irratti akka mootumma Palastiin dhabachuu qaba jeene bara 2009 OSA irratti yaada fi poropsalin dhabbilee Oromoof ergame jira. Waan asii irratti ibsamuu hin qabne yaaliin goodhame hin milikoofne maliif isaa jeedhu waan bayeetuu jira, tumsiituun (tefoozoon) ganda fi amantan wal ijjarte waan nu jeene malee hin ta’uu jeeti, Nafxanyoon Mofa fi Nafixanyoon Haaraan diina hama jeedhan yaada keenya akka hin dhaga’amne media isaanin nu ukaamsu, media Oromoo ilee nu irratti ijjarani media saba keenya irra qunamtii nu dhorkuun ukaamsa hama nu irratti geggesa jiru, diini keenya 3ffaan wari lixaa ilee kara jala adeemtuu isaan nu hordoofan hariiroo nu Uumanu hunda jala bu’ani nu jalaa diiga turan, Eritrea dha - Hanga Moscowti, USA –hanga Egypt fi Sudanti yaalin godhamee diinoota keenya kana 3 fi ergamtoota isaanin nu jala fashaala’a jira. Kanaafuu amantan keenya Abdin keenya Uummata keenya biyya jiru qoofa, humni fi meeshan keenya Qeerroo dargaggoota Oromoo fi Saba Oromoo biyya jiru qoofa. Furmati keenya fi Oggannii keenya ilee isaan.
Garboomfataa waliin Hariroo goodhane isaan waliin mari’ane isaan nu garggarani isaan irra bilisummaa bana yaada jeedhu fudhachu hin dandeenye, nu hin liqinfamuu, waan akkasi Adunya irratti ta’ee hin beeku. Kana booda ilee Diyaaspooraa Habashaa fi Oromoo habashoome waliin hiriira bu’aa hin qabne fi bakka hin tane fi nama hin barbane waliin ijjajun janja’uudha.
Nafxanyoota haaraa TPLF diina isaa durati of irra buqisuu qabna
Worqinheh Gebeyyehu Tigire ta'uu isaa qoofa utuu hin tanee siirna TPLF keessati Oromoo ajjeefaman hundati nama gaafatamuu keessa isaa 1ffaa dha, keessatu Misseensa Paarlamaa Arsi Negele MP Tesfaye Adane ajjeefamuti Worqineh Gebeyehutu itti gaafatama. Oromoon dhugan yeroo kana TPLF waliin hin dhabatuu. Tigireen Amma ilee Oromo Gowomsuu yaala jirti. Tigiroota Afaan Oromoo dubbatan Muudee Oromoo isiif muudee jeechuuf deemti.
Icciti gola TPLF keessa argane:-
Tokko: Tigirittichii Worqineh Gebeyyehu Oromoof Angoo Dabalee jeechun Muudan jiru.
Worqineh Gebeyyehu kan dur Police Commissioner turee fi ilmaan Oromoo ficisiisee dhiigi ilmaan Oromoo hedduun harka isaa irra jiru Ministera Aajajaa Alaa godhanii " Oromoof aangoo qoodnee" jedhanii fakeeffachuuf muudaan jiru. Wayyaaneen Tigire Afaan Oromoo dubatu bakka hundati muudaan kunoo Oromoo muudnee jeechuuf. Saba Oromoo fi Saba amhara irratti Tigiroota Afaan Oromoo fi Afaan Amhara dubatan Muuduun xiifuma Angoo biyyati isaa yeroo kami caalaa tofta cimma kanan saba Adunya gowomsuuf yaalaa jirti. Sabi Oromoo qabsoon inni geggesa jiru namoota TPLF bakka akka wal jijiranfi utuu hin tanee qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkanesuu waan ta’eef tofta duloma TPLF kana utuu hin dhageefatiin qabsoo isaa duraa caalaati jabeesuu qaba jeena.
Lamaaffaa: TPLF Tigiroota Afaan Oromoo Dubatan Oromiyyati bobasa jirti Oromoo diinoota kana of irra qooladhu.
Wayyaaneen biyya keessatti (keessumattuu Maqaleetti) akka Afaan Oromoo barsiisaa jirtu quba qabduu?. Barsiisonni qacaramani waggaa tokko keessatti Tigireen hedduun Afaan barachuuf leenji'uurra dabartee maqaa ofiifi kan abbaa maqaa Oromootti jijjiirsisuudhaan biyya Oromiyaa keessatti iddoo barbaachisoo dubbiin itti jajjabaattuufi diyaaspooraa keessaa ammoo iddoo hedduutti leenjisuun bobbaasteetti. Namoonni leenjii addaa afaan Oomoon cinatti dhimma 'intelegence' baratan kunneen Oromoofi dhaabbilee Oromoo gidduu sum'ii naquun, iccita uummata Oromoo gidduu adeemuu kallattumaan gooftolii saaniitiif dabarsaa oolu. Kana beektani namoota haaraa naannoo keessan dhufan mara gadi fageenyaan utuu hinqoratiin tokkummaa keessan keessatti hindabaliina. Dhaamsa kana waliif daddabarsa...
Warii kun ergamtoota TPLF umurii ishee dheerefachuf ramadatedha.
1. ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ 2. ለፐብሊክ ሰርቪስና ሰው ሃብት ልማት ሚኒስትርነት አቶ ታገሰ ጫፎ
3. ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ሚኒስትርነት ዶ/ር አብርሃም ተከስተ 4. ለንግድ ሚኒስትርነት ዶ/ር በቀለ ሙላዱ
5. ለእንስሳትና አሳ ሃብት ልማት ሚኒስትርነት ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየነ 6. ለእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስትርነት ዶ/ር እያሱ አብርሃ
7. ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትርነት ዶ/ር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ 8. ለትራንስፖርት ሚኒስትርነት አቶ አህመድ ሽዴ
9. ለከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስትርነት ዶ/ር አምባቸው መኮንን 10. ለኮንስትራክሽን ሚኒስትርነት ኢንጂነር አይሻ መሃመድ
11. ለየውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትርነት ዶ/ር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ 12. ለማዕድን፣ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስትርነት አቶ መቱማ መቃሳ 13. ለአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ሚኒስትርነት ዶ/ር ገመዶ ዳሌ
14. ለትምህርት ሚኒስትርነት ዶ/ር ሽፈራው ተክለማርያም 15. ለጤና ጥበቃ ሚኒስትርነት ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃነ
16. ለመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስትርነት ዶ/ር ግርማ አመንቴ17. ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስትርነት ዶ/ር ሂሩት ወልደማርያም
18. ለሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ሚኒስትርነት ወ/ሮ ደሚቱ ሃምቢሳ 19. ለወጣቶችና ስፓርት ሚኒስትርነት አቶ ርስቱ ይርዳው
20. ለገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሃላፊ ሚኒስትርነት አቶ ከበደ ጫኔ 21. ለመንግስት ኮሚዩንኬሽን ጉዳዮች ፅ/ቤት ሃላፊ ሚኒስትርነት ዶ/ር ነገሬ ሌንጮ:
የአቶ አባይ ጸሐዬ የቀድሞ ሚስት የነበረችው ወ/ሮ ፈትለወርቅ (ሞንጆሪኖ) ገብረእግዛቤር፣ በጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል የከተማ ዘርፍ አስተባባሪ ሆና ተሹማለች:: ወ/ሮ ፈትለ ወርቅ የአዲስ አበባው የካሳንቺሱ መንግስት ዋና አካል ናት::
አቶ ደመቀ መኮንን (ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር)፣Ø1. አቶ ሲራጅ ፈርጌሳ፣Ø2. አቶ ካሳ ተክለብርሃንØ 4. አቶ ጌታቸው አምባዬØ 5. ዶ/ር ደብረፅዮን ደብረሚካዔልØ 6. አቶ አህመድ አብተውØ 7. ዶ/ር ይናገር ደሴØ 8. አቶ አስመላሽ ወልደስላሴ እናØ 9. አቶ አብዱልፈታህ አብዱላሂØ
Nafxanyoon Mofaan diina isaa haamma dha of irra dhorku qabna
Amharii akkasiin Oromoo xiiqeesiti.
Diini Oromoo Amhara Gondor fi Gojami jiru miti diini Oromoo Nafxanyoota Amhara Oromiyaa keessatti dhalate dha. Nafxanyan Oromiyaa keessatti dhalatee hundi diina Oromooti Tigire caalaa Oromoon kana beekuu qaba.
Habashanoon kan isaan barbaadan Oromoo utuu hin tane lafa Oromooti, fayyida fi angoo dha, namni isaan deggeree Ethiopia dha, nama beeka fi qaroo dha, namni isaan deggereu dide zerenya fi dhiiphoo, walala fi yakkama dha. Nama hunda too’ana isaan jala galchan itti fayadamuu barbaadu, fakeenyaf Fayisa Lelisa kan biyya ba’eef rakko uumata isaa ibsachuuf ture, erga inni brazilii ba’ee booda kayyoo isaa jijjirsisan dhadannoo isaa jijjiran hara mallaaqa ittin kadhaachuu egalan jiru. Jarii kun bori biyya Ethiopia keessa Alaba ABO ODF irra fudhatan ittin saba keenya gowomsuu yaaluun hin olan kun ammoo biyyatti badii ishee ariifachisa sababiin isaa waan Oromoof hin tane kana booda Ethiopia keessa jirachuu hin qabu. Bilisumma dhabuun keenya Ireecha Bushooftuu irratti lubu 678 yeroo galafatuu kamp waraanaa xolayi kessatti ammo hidhamtoota lubu 850 darbuu isaa dhaga’aa jira. walumagalati wagaa kana qofa lubu Oromoo 3,000 oli waraanaa wayyanneen ajjefame jira. kanaafuu jara kana waliin Ethiopia akkas Oromoo ajjeeftu Alaba ishee badhuu naman jeechun yakka.
Median Habasha ESAT fara qabsoo Oromoo malee hin dubatu, utuu Oromoon jiran dhimma Oromoo irrati namoota Oromoo jiban afeere marisisa. Website Habasha, Facebook Habasha fi Paaltak Roomin Habasha Tigire Angoo irra jiruu dhisee Oromoo irratti olola diinuma geggesa jira. Kun maliif ta’aa jeene gaafanu nu wara Ethiopia diiguuf deemu Zeranyoota, dhiphoota jeechu dhan hamile nu cabsuuf yakka sanyii baleesan nu yakku, galtuun Oromoo tokko tokko ilee jara kana jala galtee nuti duulti.
Deutsche Welle Redion wagoota 50 darban rakko Oromoo gabase hin beeku. DW Ilaalcha fara Oromoo qaba. Hayyuun seera Beekama Dr. Bayisa Waqawaya ilee siiriti ibsuu hin dandeenye. DW maliif waan Oromoo irratti jiba akkasi akka geggesan guyya tokko ifa ba'uun isaa hin oluu. Dr. Getachew Begashaw wa’ee Oromoo du'ee dubatee hin beeku wa’ee Oromoo farda godhate garbonfatuu dubata malee. Unni ilee utuu Media Argane Getachew Haile - Hanga Haile Lereboti waan dubanu qabna, guyya Media argane kun hin oluu. Akkasit nu ukamasitan tokko ta'aa jeechun hin jiru hin yaadina.
Habasha yoomi ilee fira oromo ta'uu hin dandeesu,, qulqulu miti, dhuga hin barbaadan, dhuga hin beekan, Namoon kun hundi isaan wara Oromoo jiban Neo-Miniikan ijoole Balabatoota duran wara siirna Nyafxanya deebsuuf deeman dha. utuu Namoota dhuga ta'aan Oromoo proffserota fi doktorta heddu qaba dhaabilee siyaasaa heddu qaba maliif tokko ilee itti hin makne.
European Paarlamaan ilee Wa’ee Bilisumaa fi Walabummaa Oromoo dubachuu dhisati Ethiopiuma fudha ergasi waltajjii isiin laana jeedhu, dhiiga qeerroo Oromoo irra trkanfadhe kayyoo isaan du’anfii lagadhe ykn balaalefadhee waltajjii Habashaa fi Deggertoota isaan Europa irra fayyida hin barbaaduu foon qeeroo Oromoo fi dhiiga qeerro Oromoo nyatan dhuguu ta’aa, kayyoo saba ofi lagachuun Oromoo Milliona 50 salphisuu dha. Diina jala adeeme seena Kijijba fi popularty media irra argachuu miti waan Oromoo hin fayyadne yoo ta’ee Muumuiichaa Ministera Ethiopia ta’uun iyuu Oromoof furmata hin fiduu, furmati keenya saba keenya lafa isaa irratti abba biyya Gaanfa Afrika irratti murteessa goochuu.
 ➡#እነኚ_ነቸው_የአመረ_ምሁሮች 
ላንድነት ስባል ይሄን ችለን ስናበቃ እንደገና እየኮረኮራችውን ቂም እንድንይዝ አታድርጉን። #ከዝህ_በላይ_ዘለፋ_አለ_እንዴ? ምነው ይሄን ዝም አላችውትሳ ?
ይሄ ነው እንዴ ኢትዮጵያዊነት? እንደዚህ ከሆኔ አፈር ድሜ ትብላ።
↘"ቅንጅት በነብርንበት ግዜ ከአማርኛ ጎን ለጎን ኦሮምኛን ያገርቱ የሥራ ቋንቋ እናረጋለን ያልነው ታክትካሊ የኦሮሞን ሕዝብን ለማማለል እንጂ ከተወሰኔ ግዜ በኋላ የምንተወው ነገር ነበር።"
(የግንቦት 7 ዋና ጸሐፊ የነበሩት አሁን #በእሥር_ላይ_የምገኙ_አቶ_አንዳርጋቸው_ጽጌ)
↘" አማራው አልሞት ያለው የሥነ-ልቦና የበላይነት ስላለው ነው። በሥነ-ልቦና አሸንፈናል። ኦሮሞዎች ከምገባቸው በላይ መሬት ይዘዋል። ከኢትዮጵያ ምንም የላቸውም። በግራኝ አህመድ ግዜ በወረራ ይዘውት ነው እንጂ ።ኦሮሞዎች የመጡት ከ ኢንድ ውቅያኖስ ነው። እኔ የዘውዱ አገዛዝ እንድመለስ ይፈልጋለው።
(የሞሬሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ልቀ-መንበር አቶ ተክሌ ይሻው) https://www.facebook.com/JAJJABOO/videos/10211355814794964/
↘"ኦሮሞ የምባል ነገር የለም በታርክም የለም። ደግሞ 1974 ድርግ ከመጣ በኋላ ነው ኦሮሞ የምባል መጠርያ ያገኙት እንጂ ጋሎች ነው የምባሉት። እኔም ኦሮሞ ብዬ አልጠራቸውም።"
(አንድ እርጅና የተጫጫነው የአማራ ታርክ ተመራማሪ/ፕሮፌሰር አለም እሼቴ
ባሁኑ አጠራር ኦሮሞ፣ ድሮ ደግሞ ጋላ በመባል
የሚታወቀው ሕዝብ ሁናቴም ልክ ይኸንኑ ይመስላል። የወያኔ መንግሥት በአፄ ምኒልክ ዙፋን
እንደተቀመጠ ቦረን፣ ሜጫ፣ ቱለማ፣ ኢቱና ጉጂ በመሳሰሉት ስሞች ራሳቸውን ይጠሩ የነበሩትን ብሔረ-
ሰቦች ፣ የፈጠራ ስም ሰጥቷቸው ኦሮሞ በሚባል በጋራ መጠርያ ስም ሥር እንዲካተቱ
አስገድዷቸዋል። ይኸ ጥንት ጋላ በአሁኑ መንግሥት አጠራር “ኦሮሞ” የተባለ እረኛ ሕዝብ ለከብቱ
ግጦሽ ፍለጋ ሲል፣ በተለመደው አነጋገር “ኢትዮጵያን መውረር” ጀመረ ከተባለ ወደ፭፻ ዓመታት
ሊያስቈጥር ነው። Prof. Haile Lerebo
What most Amharas think about Oromo-must be watched
Ato Andargachew talks about Oromo language and Oromos on ESAT!!!???
SHOCKING! ኦሮሞ አንድነት ሊፈጥር አይችልም ይላል ኢሳት ። ታዲያ ኦሮሞ እንዲህ የሚለያይ ከሆነ፥ ኢትዮጵያቹ የበለጠ የተለያየችና የተዛባች አይደለችም??? Abebe Bogale AGinbot 7 foreign affairs
Habashoon maqa Yesusi fi Mariyamii dha'aan Oromoo xiqeessan, siyaasaa irratti samuu garii wa'ee Oromoo yaaduu jeedhan amanun fi Hariroo waliin humachuun walaluma dha ::
Europa Fi USA Nafxanyoota Mofa fi Haraf akka garboomnu kan nu goodhe isaan of egachuu qabna
Wari kayyoo Fayissa Lelissa buutatani diina keenyaf keenan borimoo Oromiyaa irratti nafixanya mofa angeesuuf akka isaan caaraqan Oromoon beekee itti qoopha’uu qaba.
Qabsoon Oromoo bakka kan ga’uu deggersa Europa fi USA qoofan warii jeetan yaadani doggogortan jirtu. Kaleesa gaafa Oromoo human hin qabne namani Oromoo dubsee hin jiru. Nama nu dubsuu dhabne qoora keessa dhaabbata olee gala ture. Gaafa barbaadan ol waamani nu dubsuu gaafa barbaadan ammo ni dhisuu. Europa fi USA waan isaan hubaachuu dhaban Ethiopian akka Somaliya tati malee Oromoon kana booda Nafxanya Mofa sana jalati bula jeedhan Nafxanya batan Conference jeechun yeroo isaa baleesuu akka hin qabne beeku qabu yoo nu gaafatanf itti himna. Yaadi London Conference irratti waan 3 jeedhame sun siiridha, kana booda Ethiopia kufaa jirtu utuuban utubuun bu’aa hin qabu, Ethiopia mofa diigne Ethiopia hundaf tatu ijjara, kun ta’uu banan diigne bira adeemna inni jeedhame hundi siiri dha, gaafiin Oromoo inni dhugan Bilisumma fi Walabuma Oromooti, biyya Bilisummaa hin qabne keessa jirachuun waan hin danda'amneef Oromoo Bilisumma isaa hin argatuu yoo ta’ee Ethiopian jirachuu saba achi jiruuf bala malee bu’aa hin qabu.
Amma gaafa qabsoo Oromoo humna horate cimma adeemuu ammoo haarcaatuu qabsoon tufe of keessa base funanatani habaasha jalati gurmessan qabsoo Oromoo buutani fudhachuuf deemuun kun hundi abjuu dha. Qabsoo Oromoo dhala nama miti waqii nama Uumee ilee kara irra jalisuu hin danda’uu. Oromoon Qawee Beljigii ykn qawee biyya Belgiumti hojjetame fi gargarsa European gabroome, qaween lolee bilisooma malee marii biyya Belgium Brusselsti garggarsa European goodhamuun kan bilisoomuu miti.
Europa fi USA umurii isaan siirna garboonfata Habaasha gargarani Oromoo ficisisa turan iccitiin isaani akka ba’uu hin barbaadan. France, UK fi USA siyaasaa Ethiopia keessa enyuu ilee akka harka keessa galchatuu hin feedhan. Jarii kun haraa ilee ciidha keenya irratti Habaashan akka walfutu barbaaduu, bo’iicha keenya irratti habaashan akka dhiichisuu barbaaduu. Nu kara keenya garbumma habaasha jala jiradha isaa isaan jeedhani nu gorsan hin fuudhanu, Ethiopian Oromoof hin tanee jirachuu hin qabdu.
Onkolloleessa gaafa 12 paarlamaan Europa Oromoof cuufa ture Amhara fi ergamoota isaanf malee gaafa 13 ammoo akka Alaba Habaasha banuuf waamamne. Saddaasaa 8 fi 9 ilee bakka wa'een Oromoo dubatamuu irratti kan Afeerame Dr. Brihanu Nega Asmera irratti Jaal Daawud Ibsa ammoo wa'ee Oromoo dhufee dhageefachuuf mirga dhabe. Uni wari Brussels jiru iyuu bakka walgaii dhorkamne bakka Hirira qoora keessati qoofa wamamne, akkasti yoo adeemna ta’ee Europa fi Ergamtoon isaa Oromoo rakko enyumma qaban diinaf akka itti hojeecha jiran beekne Uummata keenya biyya keessa jiru loli kara 3 itti baname jiruuf akka of qoophessan goochuu qabna. Caaraa birra hin qabnuu, wareegama gudaa nu kafalchisa malee ni moona garuu lamaffaa ergamtuu fi gantuu of keessa balleesuu qabna. Jokern Harka Oromoo jira rasaasa isaa hunda dhabamisisu fayyadamna malee kayyoon saba Oromoo diina harkati hin kufu, tufiin Oromoo irratti godhamu badii diina Oromoo ariifachisa qabsoon Oromoo EU fi USA keessati utuu hin tane abban dhugaa diire irratti beekama, namni dhugaaf falmatutu injifata, kana caalaa Habaasha sosobuuf yeroo hin qabnu.
Source: Bilisumma Walabummaa Oromiyaa